Shin Min Ah ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်နေကြောင်း သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြလိုက်သူ Kim Woo Bin
Kim Woo Bin နဲ့ Shin Min Ah တို့က အပြင်မှာလည်း အေးအတူ၊ ပူအမျှ အတူအားပေးဖေးမကြတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်စုံလေးပါ။ အခုချိန်မှာတော့ Shin Min Ah က အဓိကမင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ‘Hometown Cha Cha Cha’ ကတော့ ကြည့်ရှုသူတွေကြားမှာ တော်တော်လေး ရေပန်းစားနေပြီး Rating အမြင့်စားတွေလည်း ရရှိနေပါတယ်။
ချစ်ရသူ Min Ah ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရှုအားပေးနေကြောင်း Woo Bin ကတော့ ချစ်စရာကောင်းစွာဖြင့် သွယ်ဝိုက်ပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kim Woo Bin က ဘယ်လိုမျိုး မသိမသာလေးနဲ့ အသိပေးခဲ့သလဲဆိုတာကတော့ ချစ်စရာကြီးပါ။
Shin Min Ah နဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသား Kang Hyung Suk (Choi Soon Kyung အဖြစ် သရုပ်‌ဆောင်သူ) ဟာ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးရေးနေရာက ဓာတ်ပုံလေးတွေကို IG မှာ ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။
Gyeongju ပြည်နယ်က အလှပဆုံးနေရာတွေမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေအောက်မှာပဲ Woo Bin က “Choi Soon Kyung က အကောင်းဆုံးပဲ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ အသည်းပုံ emoji လေးတွေကိုပါသုံးပြီး Comment ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်နာမည်ကို အသုံးပြုပြီး Comment ပေးခဲ့တဲ့ Kim Woo Bin ကို ပရိသတ်တွေက “သူလည်း ‘Hometown Cha Cha Cha’ ကို ကြည့်နေတာပေါ့”, “Ah, WooBin က ချစ်စရာကောင်းလွန်းလိုက်တာ” “Woo Bin က ‘Hometown Cha Cha Cha’ ကို ကြည့်နေတယ်ပေါ့လေ.. ဟုတ်လား?! Hahaha..” စသဖြင့် သဘောကျနေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Shin Min Ah ရဲ့ ပထမဆုံး FanBoy ဆိုရင်တော့ Kim Woo Bin ကို လက်ညိုးထိုးပြရတော့မှာပါပဲ။
Kim Woo Bin, Shin Min Ah နဲ့ Kang Hyung Suk တို့ဟာ သရုပ်ဆောင်အေဂျင်စီ AM Entertainment ရဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ‘Hometown Cha Cha Cha’ ကို ကြည့်နေတဲ့ WooBin ကတော့ Shin Min Ah နဲ့ Kim Seon Ho တို့ရဲ့ အ Ro ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုပါ ကြည့်မိနေလောက်ပါတယ်နော်။
Next နတ်သမီးပုံပြင်ထဲက ဇာတ်​​ဆောင်တွေလို "Snowdrop" ပိုစတာထဲမှာ ရိုဆန်​နေကြတဲ့ Jung Hae In နဲ့ Jisoo »
Previous « ပြည်ပ, ပရိသတ်တွေဆီက အားပေးချစ်ခင်မှုတွေ ရရှိထားကြတဲ့ ထိုင်းဇာတ်လမ်းစုံတွဲ (၁၁) တွဲ
‘2021 Asia Artist Awards’ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် တက်ရောက်သွားမယ့် BrightWin စုံတွဲ
Halloween ပါတီအတွက် Twilight ကားထဲက Bella နဲ့ Edward ကို cosplay ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ Taeyong
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ LIVE လေးမှာ Anti Fan တွေ နှောင့်ယှက်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ Zhao Lusi